« Sojabe » ao amin’ny Faritr’i Sofia : Manohana tsy misy fepetra an-dRajaonarimampianina -
AccueilRaharaham-pirenena« Sojabe » ao amin’ny Faritr’i Sofia : Manohana tsy misy fepetra an-dRajaonarimampianina
Nanamafy ny fanohanany ny fitondram-panjakana tarihin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina ireo Sojabe ao amin’ny Faritr’i Sofia. Efa nanao fanambarana momba izany mantsy izy ireo tamin’inyvolana lasa iny, ka dia izao nohamafisiny izao indray.
« Manamafy ny fanohananay ny asam-pampandrosoana tarihin’ny Filoha izahay. Mankasitraka ihany koa tamin’ny tolo-tanana izay nataony noho ny voina nahazo ny mponin’Antsakabary. Hamafisinay etoana fa manohana tsy misy fepetra anao izahay andriamatoa Filoham-pirenena. Tsy ankasitrahanay kosa ireny fanambaran’ny Sojabe vitsivitsy tamin’ny haino aman-jery tany Antananarivo ireny. Azo sokajiana ho mersenera politika izy ireny satria tsy nifampierana tamin’ny fikambanana Sojabe ato aminay ny teny nambarany », hoy ireto Sojabe avy ao Sofia ireto, ny faran’ny herinandro teo.
Ny sabotsy teo dia niverina tany Befandriana Avaratra, Faritra Sofia ny minisitry ny Asa Vaventy Eric Razafimandimby no sady minisitra “ Coach ” an’iny faritra Sofia iny nanolotra ny fanomezana avy amin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina.
Notsipihin’ity minisitry ny Asa Vaventy Eric Razafimandimby ity tamin’izany fa ny fitondram-panjakana no nandray andraikitra voalohany nanampy an’ireo traboina tao Antsakabary ary nanolotra fanampiana ho azy ireo. Tamin’ny voalohany dia efa nandefa fanampiana tany Antsakabary ny fanjakana tamin’ny alalan’ny Bngrc, izay ahitana vary fotsy 124 gony, Tsiasisa 75 gony, trano lay 10 kitapo, kojakoja an-dakozia toa ny zinga miisa 12 « paquets », « sceau » miisa 1 000, vilany 2 gony, vilany 10 fehezana, lamba « balle » 2 sns…Tamin’io sabotsy 4 Marsa io kosa dia mbola nitondra fanampiana ho an’ireto mpiray tanindrazana ao Antsakabary ihany ny minisitra, izay ahitana vary 84 gony, « sceau » 50, koveta 50, kaopy 50, tafo fanitso 300, simenitra 20 gony, fantsika , sns….
Mbola nanamafy ny minisitra Eric Razafimandimby fa mbola hisy ny fanampiana hafa avy amin’ny fitondram-panjakana.
Natao mangarahara ny fanomezana an’ireo fanampiana avy amin’ny fanjakana ireo ary nomena lelavola 3 tapitrisa ariary ireo solontenan’ny vahoaka hitaterana an’ireo entana ireo any Antsakabary. « Mahatsiaro ho manana ray aman-dreny tokoa izahay. Isaoranay ny filoham-pirenena sy ny praiminisitra nijery anay », hoy Ramiarimanana Claude filohan’ny filan-kevitry ny kaomina ao Antsakabary. Nanotrona ity fotoana nahatongavan’ny solontenan’ny filoham-pirenena sy ny praiminisitra ity tany an-toerana kosa ny sekretera jeneralin’ny Faritra Sofia nisolo tena ny lehiben’ny Faritra, ny Préfet an’Antsohihy, ramatoa lefitry ny distrikan’i Befandriana Avaratra, ny filohan’ny Sojabe ao Befandriana Jamarina Edmond sy ireo mpikambana ao anatin’io fikambanana io, ny Soja be ao Antsohihy Salimo Ali, ny Sojaben’i Mandritsara andriamatoa Mampity Armand, ny ben’ny tanànan’i Befandriana, ny filohan’ny fikambanan’i Sofia Miray, ny filohan’ny fikambanana “ Collectif des Cadres et des Itellectuels de la Région Sofia”.